मे २०१ - - नेटवर्क रेडियो
घर / 2018 / May
महिना: 2018 सक्छ
प्रकाशित 23 सक्छ, 2018 26 सक्छ, 2018
F RFinder K3 र M1 बीचका भिन्नताहरू
यो RFinder K1 भन्दा सानो छ M1.
डुअल सिम कार्ड स्लट
यो RFinder K1 एक ड्युअल सिम कार्ड स्लट छ, त्यसैले तपाईं वास्तवमा उही रेडियोमा दुई फरक सेलफोन प्रदायकहरू पाउन र कल गर्न, प्राप्त गर्न र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दुबै प्रदायकहरूबाट डाटा सेवाहरू।
वैकल्पिक ड्रप-इन चार्जर
यो सम्भवत यसका लागि सब भन्दा लोकप्रिय सहयोगी हो K1। यसलाई चार्जरमा मात्र छोड्नुहोस् र आफ्नो जीवनको साथ अघि बढ्नुहोस्!
यी रेडियोहरूले के गर्न सक्दछन्?
डीएमआर अपरेशन रोमाञ्चक छ, तर कोड प्लगहरूसँग व्यवहार गर्दा भयानक टाउको हुन सक्छ। RFinder ले सजिलो बनाउँछ।
के हुन्छ यदि तपाईंसँग सबै डीएमआर रिपीटरहरूको डाटाबेसको साथ रेडियो हुन सक्दछ जुन लगातार अपडेट हुन्छ र तपाईंले ठीक बताउनु हुन्छ र सही फ्रिक्वेन्सी र सेटिंग्समा परिवर्तन गर्न क्लिक गर्नुहोस्? र यो केवल डीएमआरको बारेमा मात्र होईन, तर एनालग रिपीटरहरू र इकोलिंक नोडहरू पनि।
यो RFinder अवधारणा हो। DMR सजिलो भयो! तपाईंको जीपीएस स्थान पाउनुहोस्, नजिकका रिपेटरहरू फेला पार्नुहोस्, सूचीबाट यसलाई छनौट गर्नुहोस्, र रेडियो पूर्ण रूपमा कन्फिगर गरिएको छ!
यो--वाट ट्रान्ससीभर एक शक्तिशाली G जी / एलटीई एन्ड्रोइड स्मार्टफोन पनि हो र यसले अमेरिका / सीए, इयु, युके, अष्ट्रेलिया र प्रायजसो देशहरूमा राम्रोसँग काम गर्दछ।
आधिकारिक भ्रमण गर्नुहोस् RFinder वेबसाइट
प्रकाशित 22 सक्छ, 2018 22 सक्छ, 2018
नेटवर्क रेडियोको स्वामित्व प्राप्त गर्नका लागि १० कारणहरू!
कुनै पनि नेटवर्क रेडियो १०% छुटको साथ पाउनुहोस्। अझै यो प्रविधि संग संघर्ष गर्दै?
हाम्रो न्यूजलेटर सदस्यता लिनुहोस् र नेटवर्क रेडियोको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा जान्नुहोस् र तपाईंको छुट वाउचर पाउनुहोस्।
नेटवर्क-radios.com पहिलो र मूल वेबसाइट हो कि एमेच्योर रेडियोको यस अद्भुत शाखालाई १००% समर्पित छ।
प्रकाशित 17 सक्छ, 2018 17 सक्छ, 2018
RT4 - नेटवर्क रेडियो प्राधिकरण
यो रेडियो टोन RT4 हाल केवल G जी / एलटीई नेटवर्क रेडियो छ जुन अमेरिका र युरोपमा काम गर्दछ। Inrico T4 भन्दा फरक, यसले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र EU / युके 320G जी / G जी ब्यान्ड प्रदान गर्दछ। यो बनाउँछ RT4 सबै भन्दा राम्रो यात्रा साथी। यदि तपाईं नेटवर्क रेडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, त्यसो गर्न तपाईंसँग राम्रो तरीकाले सुरू गर्न सक्नुहुन्न!
हेम्सका लागि स्मार्टफोन
तपाईं यसलाई सामान्य सेलफोनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको इ-मेलहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, इन्टरनेट ब्राउज गर्न सक्नुहुनेछ IRN, Echolink, Zello र अन्य अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरेर तपाईंको ह्याम साथीहरूलाई।
लामो समयसम्म ब्याट्रि
यो 4600 XNUMX०० mAh ब्याट्रीले तपाइँलाई तपाइँको रेडियो एक दिन भन्दा बढि अपरेट गर्न दिनेछ।
एक भिडियो समीक्षा
म इच्छुक छु! मलाई खरीद गर्नको लागि उत्तम स्थानमा लैजानुहोस्!
प्रकाशित 16 सक्छ, 2018 16 सक्छ, 2018
त्यसो भए "रियल ह्याम रेडियो" के हो त?
यस वर्षको सुरूमा मैले एउटा टुक्रा लेखें "यो वास्तविक ह्याम रेडियो होईन"।
यसले धेरै हलचल मच्चायो र पछि विश्वभर फैलियो, प्रसारण गरियो र धेरै ठाउँमा र पत्रिकाहरूमा उद्धृत गरियो।
आधारभूत आधार यो हो कि जब नयाँ टेक्नोलोजी एमेच्योर रेडियो हबीमा आउँदछ, हैम्सलाई प्राय: उनीहरूसँग अनुकूल हुन गाह्रो हुन्छ।
परिवर्तनले प्रतिक्रियाको माग गर्दछ
यो, वास्तविकतामा, आश्चर्यचकित हुनु हुँदैन। तपाईको व्यक्तिगत र कार्य जीवनका धेरै उदाहरणका बारे सोच्न सक्नुहुनेछ जब परिवर्तन आउँदछ, प्रायः अप्रत्याशित रूपमा।
समस्या यो छ कि परिवर्तन थोरै डरलाग्दो छ - र यो यो हो कि यसले हामी कुनै न कुनै रूपमा प्रतिक्रियाको माग गर्दछ।
Ways तरीकाहरू हामी परिवर्तन गर्न प्रतिक्रिया
प्राय: हाम्रो प्रतिक्रिया भनेको कुनै पनि परिवर्तनलाई खारेज गर्नु र यथास्थितिमा रहन प्रयास गर्नु हो, जहाँ हामी महसुस गर्छौं कि हामी हाम्रो "मैदान" जान्दछौं र जहाँ हामी सुरक्षित महसुस गर्छौं। यहाँ समस्या यो हो कि कुनै पनि परिवर्तनहरू त्यसपछि हामीलाई पास गर्न सकिन्छ - हामी सजिलै चिच्याउन सक्दछौं जुन द्रुत रूपमा "विगत" बन्छ।
अन्य समय हामी छौं बाध्य बोर्ड चीजहरू लिन हामी वास्तवमै चाहँदैनौं। (प्राय जसो पटक, ती चीजहरू हामीले सोचेजस्तो खराब नहुनुमा बदलियो, भिन्न।)
र धेरै कहिलेकाँही हामी वास्तवमै सबै सकारात्मक र प्राप्त गर्छौं गम्भीर परिवर्तन गर्नुहोस् र यसको बारे मा धेरै उत्साहित बन्नुहोस्।
समय फरक तरिकाले सोध्नु ..
त्यसोभए, मेरो प्रारम्भिक लेखमा पुन: अवलोकन गर्दै मैले सोचे कि यो प्रश्न सम्बोधन गर्न सम्भवतः समय आएको छ, वास्तवमा "रियल ह्याम रेडियो" के हो?
यसको तुरून्तै, मँ यहाँ एक समस्या महसुस गर्दछु - तपाईले यस प्रश्नको लागी बिभिन्न उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ जुन विश्वको हरेक हाम बाट हुन सक्छ!
एक क्यूआरपीर तपाईंलाई हाम रेडियो अधिक दूरी प्राप्त गर्न कम्तिमा शक्ति प्रयोगको बारेमा बताउनेछ
एक एमेच्योर टिभी उत्साही क्यामेरा, टेस्ट कार्ड, रिपीटरहरू र माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीहरू एन्टेनाका लागि भाँडा माझेर कुरा गर्न सक्दछ
DX-er ले तपाईंलाई थाँहा पाइल-अपको उत्तेजनाका कथाहरू र भावनाले पछ्याउँदछ जब तपाईं आफ्नो DXCC तिर नयाँ देश "बैग" गर्दा पाउनुहुन्छ।
एक शीर्ष ब्यान्ड र्याग-चियर राम्रो संग उसले तपाईंलाई अनगिन्ती वर्षहरुमा बनाएको मित्रता र करीव बन्धन जुन बनेको छ (र धेरै बियर खपत!) को परिणामको रूपमा भन्न सक्छ।
एक CW उत्साही शायद तपाइँलाई प्रारम्भिक ह्याम्स को मूल भावना को कती नजिक लाग्छ बताउँछ
एक एलएफ उत्साही एक घण्टा को बारे मा बताउन सक्छ ठूलो कुण्डली घुमाउन एन्टेना खेल प्राप्त गर्न को लागी, केवल कम ERP प्राप्त गर्न को लागी
माइक्रोवेव विशेषज्ञले बताउन सक्छन सम्मेलन मा हर्न एन्टेना लाईनिंग अप को बारे मा बताउन को लागी DX संपर्क प्राप्त गर्न को लागी हिउँ स्क्याटर को प्रसार को एक रूप को रूप मा प्राप्त गर्न को लागी।
एक सोटा हाइकरले तपाईंलाई राम्रो आउटडोरमा रेडियोको आनन्दको बारेमा भन्न सक्दछ र कसरी ब्याट्रीहरूको साथ जीवन उत्तम हुन्छ।
यी सबै उदाहरणहरू, र म जान सक्दछु, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हो "हम रेडियो के हो?"
तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ हाम रेडियो हुन?
केही हदसम्म, यो स्पष्ट देखिन्छ कि "रियल ह्याम रेडियो" भनेको के हो तपाईं यो हुन चाहन्छ, के हो तपाईं यसको लागि बनाउनुहोस् आफैलाई.
केही शौकहरूको तिनीहरूसँग यति विस्तृत श्रृंखला छ, अन्वेषण गर्न धेरै अवसरहरू - मलाई शंका छ कि कुनै पनि एक एमेच्योरले उनीहरू सबैलाई भेट्न मद्दत गरेको छ!
उदाहरणका लागि, एफटी, हालको डिजीमोड दृश्यमा देखापर्ने हो र हम समुदायलाई आँधीबेहरीले घेरेको छ जस्तो देखिन्छ - यद्यपि त्यहाँ धेरै छन्, म आफैं पनि सामेल छन्, जो के छैन कम्प्युटर-टाइप गर्ने मोडहरूबाट एक लात प्राप्त गर्नुहोस्। मलाई मेरा साथीहरू यसको लागि उत्साहित देख्न मन पराउँछन्, किनकि यसले शौकलाई जीवित राख्छ।
त्यसोभए के हामी "रियल ह्याम रेडियो" परिभाषित गर्न सक्दछौं?
स्पष्ट कुरा यो समस्या हो!
मेरो सुरुको लेख पछि मेरो केही हेम्ससँग लामो लामो पत्राचार थियो। हामीले कडा परिश्रम गर्नुपर्‍यो कि साझा शौकलाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर एक अर्कालाई सन्तुष्ट पार्ने खालका मैदानहरू पत्ता लगाउन।
मैले एक अमेरिकी एमेच्योरसँग एक उत्कृष्ट विचारशील बहस गरेको थियो जसको दौरान हामी दुबै चुनौतीहरू थियौं कि हामीले कसरी सोखलाई परिभाषित गर्यौं। हामीले यसका नजिक भएको कुनै चीजमा हाम्रो ईमेल एक्सचेन्जको उद्देश्यहरूको लागि सहमति गर्न सफल भयौं।
"ह्याम रेडियो एउटा शौक हो जहाँ सरकारले अनुमोदित इजाजत पत्र हामीले के पाउँछौं पर्छ हाम्रो इजाजतपत्र सर्तहरूको पालना गर्न गर्नुहोस्। तर यो सम्बन्धित छ केवल आरएफको उत्सर्जनका लागि - शौकमा संलग्न अरू केहि पनि स्पष्टसँग हुनेछ छैन लाईसेन्स चाहिन्छ। ”
यसैले हामीले परिभाषा डिस्टिल गर्यौं पूर्ण रूपमा शुद्ध TX-ing कानूनी एमेच्योर ब्यान्ड कानुनी रूपमा जुन लाइसेन्स जारी गर्दछ र अरू केहि पनि छैन।
तर के त्यसले वास्तवमा ह्याम रेडियोलाई परिभाषित गर्दछ?
मेरो ग्राहक छ जो एक स्थानीय विश्वविद्यालय मा एक व्याख्याता छ। उ एक डाक्टर हो र उसको विशेषज्ञता माइक्रोवेभ टेक्नोलोजी हो। उहाँसँग आफ्नै अनुसन्धान प्रोफाइल छ र शिक्षकहरू पनि स्नातक। म जस्तो उहाँ G7 कलमा राख्नुहुन्छ। मलाई जस्तो नभए पनि ऊसँग छ कहिल्यै पनि हावामा
ऊ एक एमेच्योर हो? हाम्रो प्रारम्भिक परिभाषा द्वारा, उत्तर होईन, केवल किनभने उसले छनौट गर्दछ छैन आरएफ को विशिष्ट भाग मा प्रसारित गर्न।
खैर, यो मानिस, वास्तविकतामा, एक वास्तविक आरएफ "पेशेवर" हो - जब उनी रेडियोको कुरा आउँछन् एक शौकिया होइन (सानो सानोसँग)। उनी रेडियोको बारेमा विश्वव्यापी धेरै मानिसहरु भन्दा बढी जान्दछन्, विशेष गरी माइक्रोवेभहरु।
फेरी प्रयास गरौ…
ठीक छ परिभाषा संशोधन गरौं।
हुनसक्छ हामी भन्न सक्छौं "एक रेडियो ह्याम त्यस्तो व्यक्ति हो जसले विशिष्ट एमेच्योर ब्यान्डमा प्रसारण गर्ने इजाजतपत्र राख्छ, चाहे त्यसो नगर्ने।"
त्यहाँ - त्यो उत्तम छ। हामी अब हाम्रो नयाँ परिभाषामा मेरो ग्राहक गणना गर्न सक्छौं।
त्यसले मेरो अर्को साथीलाई पनि समेट्छ जो निर्माणको शुरूआतमा छ र स्क्रैचबाट ट्रान्समिटर बनाउँदै छ। उसले निर्माण गरेर हाम्रो शौकबाट उसको किकहरू प्राप्त गर्दछ - तर ऊ कहिल्यै हावामा चल्दैन।
उसले केवल आफ्नो घर-निर्मित रेडियोको नक्कली भारमा परीक्षण गर्दछ र त्यसपछि सामान्यतया तिनीहरूलाई रुचिमा उनीहरूलाई दिन्छ जसले अपरेटिंग साइडको मजा लिन्छन्। यो चुनिंदा हुनेछ कि ऊ "रियल रेडियो एमेच्योर" थिएनन्, यद्यपि प्राविधिक रूपमा पनि, उनी थिएनन छ उसको शौकबाट आउने कुराको लागि हाम बन्नको लागि परीक्षा पास गर्न।
त्यसो भए यहाँ अर्को मुद्दा छ - के तपाईं "रियल रेडियो एमेच्योर" हुन सक्नुहुन्छ, वा परम्परागत ह्याम गतिविधिहरूमा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ, र इजाजतपत्र परीक्षा पनि लिनुहुन्न?
यो अझ गाह्रो हुँदै गइरहेको छ - हुनसक्छ हामी "एमेच्योर" को मूल शब्दमा फर्केर जान सक्छौं - ल्याटिन 'आमारे' - लाई माया गर्न।
एमेचर्स र प्रोफेशन्स बीचको भिन्नता यो हो कि प्रेमको लागि पूर्व अभ्यासहरू र उत्तरवर्तीले यसलाई एक पेशाको लागि गर्छ; सबै सम्भावना मा तिनीहरूले यसको लागि भुक्तानी हुनेछ।
हामी रेडियोलाई "प्रेम" गर्छौं ताकि परिभाषाले काम गर्न सक्छ, होइन? हुनसक्छ वा हुन सक्दैन!
जे भए पनि, सीबी-ईरहरू पनि रेडियोका प्रेमीहरू हुन्। त्यसैले "फ्रिब्यान्डरहरू" र धेरै उड्डयन उत्साहीहरू छन्।
वास्तवमा, धेरै अन्य शौकहरू हामीलाई कुनै न कुनै तरिकाले पार गर्छन् - मोडेल एयरक्राफ्ट उत्साहीहरू आफ्नो शौकको काम गर्नका लागि क्रममा आरएफ प्रयोग गर्दछन्, उदाहरणका लागि।
त्यसोभए हामी कहाँ जानेछौं?
हामी बाहिर कुनै बाटो बिना एक de-sac- जस्तो देखिन्छ।
हामी आरएफ प्रसारण गरेर ह्याम रेडियोलाई परिभाषित गर्न सक्दैनौं - स्पष्ट रूपमा हामी अझै पनि हम्स हौं जब हामी हुन्छौं छैन विशिष्ट ब्यान्डमा आरएफ प्रसारण गर्दै
हामी हेम रेडियो द्वारा पर्याप्त परिभाषित गर्न सक्दैनौं मात्र इजाजतपत्र परीक्षाको पासिंग, मेरो चिकित्सक क्लाइन्ट जस्ता जो वास्तवमा कहिले पनि हावामा चल्दैन वा कुनै स्वीकार्य फारममा शौकको अभ्यास गर्दैन
हाम रेडियोलाई हामी "रेडियोको प्रेम" द्वारा परिभाषित गर्न सक्दैनौं, किनकि यसले हाम्रो रुचीको किनारमा रहेका समूहहरूलाई समाहित गर्दछ तर यसको भाग छैन।
त्यसैले हामी यहाँ छौं र अब नेटवर्क रेडियोहरू दृश्यमा आइपुगेका छन् र मानिसहरूले उनीहरूको टाउकोमा खेर फाल्दै छन् कि हामी तिनीहरूलाई "स्वीकार" गर्छौं कि गर्दैनौं, मानौं हामी "वास्तविक रेडियो सत्यका संरक्षक" हौं!
मलाई लाग्छ समस्या यो हो कि टेक्नोलोजीले अझ बढी गाह्रो बनाएको छ हाम्रो शौक वास्तवमा के हो परिभाषित गर्न - र नयाँ र नयाँ टेक्नोलोजीहरू स्ट्रिममा आउँदा, यो अझै अझ बढ्न सक्दछ!
सायद हामीले "बाकस बाहिर" केहि बढी सोच्न आवश्यक छ?
यो "वास्तविक ह्याम रेडियो" होइन ... वा यो हो?
नेटवर्क रेडियोहरू निश्चित रूपमा ह्याम ब्यान्डमा प्रसारित हुँदैन त्यसैले परिभाषामा फिट हुँदैन।
जबकि तिनीहरू परिभाषा दुई मा फिट सक्छ - तपाईं एक एमेच्योर जस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं त्यसो गर्न रोज्नुभयो भने। यदि तपाईं ह्याम प्रोटोकोल प्रयोग गर्न छान्नुहुन्छ, ठीक छ, त्यो तपाईंको प्राथमिकता हो।
तिनीहरू परिभाषा into मा धेरै फिट हुन्छन् जुन अर्थमा हामी उनीहरूलाई आफ्नो "खुशी" र रमाईलोको लागि फिट देख्ने तरिकामा प्रयोग गर्न सक्दछौं।
थप परिभाषा आवश्यक छ!
एक शौक को परिभाषा को लागी एक चाँडो खोजी यस संगै आउँछ - "क्रियाकलाप रमाइलोको लागि फुर्सतको समयमा नियमित रुपमा गरिन्छ "।
राम्रो नेटवर्क रेडियो पनि ठीक छ कि फिट - र बुट गर्न, तिनीहरू पनि श्रृंखला मा विभिन्न बिन्दुमा आरएफ प्रयोग, सेलुलर वा वाई-फाई फ्रिक्वेन्सी मा यद्यपि।
तर त्यहाँ अझै छ ...
जे होस्, याद गर्नुहोस् कि ती स्ट्रिमिंग अडियोको माध्यमबाट वा रिमोट अपरेसनको माध्यमबाट, उदाहरणका लागि, HF ट्रान्ससिभरको माध्यमबाट ह्याम ब्यान्डमा क्रसओभर पनि गर्न सक्दछन्। यो स्पष्ट छ हुनेछ एक एमेच्योर सेवा लाइसेन्स आवश्यक छ।
त्यसोभए विचित्र रूपमा, त्यहाँ एक अनुभूति छ जुन नेटवर्क रेडियोहरूले एकैसाथ लिनसिन लिन आवश्यक पर्दैन र हुन पनि सक्दैन!
के यो थोरै अनौंठो भन्दा बढि पाइरहेको छैन? टेक्नोलोजिकल कन्ड्रमहरू तपाईंको लागि के हो भन्ने कुरा यही हो!
अब त्यहाँ एक चुनौती छ!
मैले यस लेखको सुरूमा भनेजस्तै परिवर्तन गर्नुहोस् चुनौतीहरू हामी - यो चुनौतीहरू यथास्थिति।
परिवर्तन हाम्रो शौकमा धेरै पटक आएको छ (यो मेरो मूल लेखको मुख्य पोइन्ट थियो) र यसले नेटवर्क रेडियोको व्यक्तित्वमा हामीलाई चुनौती दिइरहेको छ।
हुनसक्छ हामीले हाम्रो परिभाषा विस्तृत गर्नुपर्दछ; यस तरिकामा, हामी हाम्रो शौकमा धेरै अधिक समाहित गर्न सक्दछौं र हुनसक्छ अरूमा पुग्न र बढ्न पनि सक्दछौं।
वैकल्पिक "ह्याचहरू कुट्न" हो र हाम्रो आफ्नै सोखको सानो कुनामा रक्षा गर्ने प्रयास गर्नु हो - अन्तमा, मलाई लाग्छ कि सडक सजिलै लोप हुन सक्छ।
परिवर्तन? वा अवसर?
मलाई सेठ गोडिनको यो मनपर्‍यो - (यदि तपाईंले उनीबारे सुन्नुभएन भने, उनका टेड वार्तालापहरू हेर्नुहोस्)
उनी भन्छन्, "परिवर्तन खतरा होइन - यो अवसर हो। अस्तित्व छ नहीं लक्ष्य, ट्राफिकेसन सफलता " (जोर मेरो)
विरोधाभासपूर्ण रूपमा, यो वास्तवमा परिवर्तन हो कि अन्ततः शौक अगाडि बढाउछ।
केवल "बाँच्न" को लागी प्रयास गर्दै मात्र हामीले विगतमा के ग mean्यौं भनेको अर्थ बढ्नेछौं बरु हामी संकुचित हुनेछौं।
नेटवर्क रेडियो यो विकास "अवसर" को एक हिस्सा हुन सक्छ - के यो उनीहरूलाई अँगाले लायक छैन यदि तिनीहरू छन् भने?
त्यसोभए हामीमध्ये कोहीले के गुमाउनुपर्ला? हुन सक्छ हाम्रो परिवर्तनको डर बाहेक?
प्रकाशित5सक्छ, 2018 सेप्टेम्बर 7, 2018
Inrico T199 र T192 मा APN सेटिंग्स कसरी परिवर्तन गर्ने
को APN सेटिंग्स परिवर्तन गर्न Inrico T199 वा Inrico T192 त्यहाँ दुई विधिहरू छन्।
विधि # १ (सजिलो) को साथ सुरू गरौं
डाउनलोड टोटल कन्ट्रोल
एक माइक्रो USB केबलको प्रयोग गरेर रेडियोमा जडान गर्नुहोस् (केबलले डेटा ह्यान्डल गर्न सक्दछ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्दछ - केहि काम गर्दैन); T192 को लागी तपाइँलाई माइक्रोयूएसबी एडाप्टर चाहिन्छ जस्तो कि तलको चित्रमा देखाईएको छ।
कुल भिडियोले कसरी यो भिडियोमा काम गर्दछ जान्नुहोस्:
यसलाई स्थापित गर्नुहोस् अनुप्रयोगभिडियोमा जस्तै समान विधि प्रयोग गर्दै।
निश्चित गर्नुहोस् कि रेडियो उडान मोडको साथमा छ - ताकि तपाईं सानो हवाईजहाज आइकन देख्नुहुन्न।
तपाईंले वाहकहरूको सूची देख्नुहुनेछ। केवल पहिलो छनौट गर्नुहोस्, र त्यसपछि कालो सर्कल भएको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र APN सेटिंग्स तपाईंको लागि देखा पर्नेछ। स्वतन्त्र परिवर्तन गर्नुहोस्।
उदाहरण को लागी, स्ट्रेट टक (AT&T) को लागि तपाईले तलको सेटिंग्स सहित नयाँ एपीएन प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ:
एपीएन नाम सीधा कुराकानी
प्रोक्सी खाली छोड्नुहोस्
पोर्ट खाली छोड्नुहोस्
प्रयोगकर्ता नाम खाली छोड्नुहोस्
पासवर्ड खाली छोड्नुहोस्
सर्भर खाली छोड्नुहोस्
एमएमएस प्रोक्सी mms3.tracfone.com
एमएमएस पोर्ट 80
नयाँ APN बचत गर्न नबिर्सनुहोस् र यसमा परिवर्तन गर्नुहोस्। अन्तमा, उडान मोड खोल्नुहोस् र फेरि बन्द गर्नुहोस्। तिमि तयार छाै!
विधि # २ को लागि तपाईंलाई विशेष USB केबल चाहिन्छ जो कान / माइक सकेटमा जोड्दछ।
पहिले, तपाईंलाई आवश्यक छ CP210x USB बाट UART ब्रिज VCP ड्राइभरहरू र पीसी सेटिंग्स सफ्टवेयर चलाउन।
निश्चित गर्नुहोस् कि T199 USB केबल जडित छ, रेडियो खोल्नुहोस् र PCSettingsEN.exe चलाउनुहोस्। तपाईले यस पर्दा पाउनुहुनेछ:
सबै आवश्यक परिवर्तन गर्नुहोस् र तपाईं सकियो!
प्रकाशित3सक्छ, 2018
क्रिस G7DDN द्वारा
एउटा चीज जुन मलाई आकर्षित गर्दछ (र सम्भवतः तिमी पनि) एमेच्योर रेडियोमा लामो दूरी (वा DX) सम्पर्कहरू बनाउने क्षमता थियो।
सन्‌ १ 1960 .० र १ 1970 s० को दशकमा यद्यपि बहुसंख्यक जनसंख्याका लागि अर्को देशमा कसैसँग कुरा गर्नु एक जटिल र महँगो व्यवसाय थियो।
एउटा उदाहरण ...
मलाई याद छ मेरा आमाबुवाले रेडियो नेदरल्याण्डको मासिक "हेप्पी स्टेशन" फोन-इनमा सामेल हुन १ allowed .० को दशकको शुरुमा दुई अलग अवसरहरूमा सामेल हुन अनुमति पाउनुभयो।
बेलायतमा, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अपरेटर सेवा पहिले कल गर्न र कल बुकिंग समावेश थियो। तपाईंलाई कुनै पनि कारणको लागि, ती दिनमा आफैंलाई डायल गर्न अनुमति दिइएन!
तपाईंले नम्बर दिनुहोस् जुन तपाईंले अपरेटरलाई कल गर्न चाहानुहुन्छ र व्याख्या गर्न कोशिस गर्नु राम्रो हुन्छ यदि उनीहरूले निश्चित समयमा कल गर्न सक्थे यो फोन-इन भएको भए पनि, तर वास्तवमा तपाईं ईश्वरको काखमा हुनुहुन्थ्यो - तपाईं लाममा तपाईंको पालो पर्खनु पर्‍यो!
अन्ततः यद्यपि अपरेटरले तपाईंलाई फेरि कल गर्दछ र तपाईंको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर डायल गर्दछ। केहि अत्युत्तम खर्चमा तपाईलाई अन्तत: भित्र पार गरियो (वा होइन, फोन-इन प्रोग्रामको सवालमा नम्बर त्यतिबेला संलग्न गरिएको थियो - शीश!)
ह्याम रेडियो - केहि विशेष
त्यस दिन रेडियो एमेच्योर बन्नु भनेको आधुनिक अप-टु-डेट टेक्निकल शौकमा पुग्ने तरीका मात्र थिएन, यो तपाईंको रेडियो सीपको प्रयोगबाट टाढा टाढाका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न, विश्व भूगोलको बारेमा सिक्न, र ती जादुई QSL कार्डहरू प्राप्त गर्नुहोस् जसले तपाईंको साथीहरूलाई प्रमाणित गर्‍यो कि तपाईंले केही विशेष प्राप्त गर्नुभयो र तपाईंले वास्तवमै सबै बनाउनु भएन!
तपाईं थिए कसैलाई हाम जस्तो!
युके-टु-युके पनि प्रभावशाली थियो
बेलायतमा अन्य अपरेटरहरूसँग कुराकानी पनि केही कुरा थियो।
मोटरवेजका दिनहरू अघि (यु.एस.का चचेरे भाईहरूका लागि फ्रीवे, युरोपमा अटोरोइट्स) सम्पूर्ण देशभरि यात्राले सजीलै घण्टा लिन सक्थ्यो। मलाई मेरो परिवारले १ Dev in in मा डेभनमा समुद्री किनारमा गरेको यात्रा सम्झन्छु जुन पुरानो "A" सडकमा hours घण्टाको उत्तम भाग थियो ...
एक दिन ह्यामको रूपमा, डेभनको स्टेशनसँग कुरा गर्न पनि राम्रो लाग्यो, विश्वको अर्को छेउमा कसैसँग कुरा गरेको जस्तो लाग्यो!
त्यसोभए त्यसबेला रेडियो एमेच्योर हुनु वास्तवमै "एयरवेजका राजा" बन्नु जस्तै थियो - विश्व शाब्दिक रूपमा तपाईंको सीप थियो!
जब सीबी रेडियो र 446 27 मेगाहर्ट्जको साथ आयो, यो सेवाहरूबाट हाम रेडियोलाई छुट्याउन सजिलो थियो - तिनीहरू छोटो दूरी रेडियोको रूपमा मात्र डिजाइन गरिएको थियो र, जबसम्म परिस्थितिहरू अपवाद हुदैन (जुन उनीहरू कहिलेकाँही २ XNUMX मेगाहर्ट्जमा थिए!) तिनीहरूले सामान्य रूपमा लामो समयसम्म निरन्तरता दिएनन्। - दूरी प्रसार।
ती सेवाहरू एमेच्योर रेडियोको परिणाममा कुनै खतरा थिएनन् - र दुःखको कुरा, आंशिक रूपमा यसको कारणले गर्दा, धेरै धेरै एमेच्यर्सले त्यस समयमा सीबी-ईर्सलाई हेरेन। - यो "वास्तविक रेडियो" थिएन र यसका अपरेटरहरू "हीन" थिए र "उचित रेडियो बुझ्दैनन्"। (सुन्नुभयो त्यो भन्दा पहिले कहिँ पनि, वैसे?)
तालिकाहरू फर्केका छन्!
अब आजको लागि छिटो फर्वार्ड - र टेबुल धेरै धेरै बदलिएको छ!
इन्टरनेट को मतलब धेरै धेरै छ सबैलाई विभिन्न प्रकारका, विश्वव्यापी संचार गर्न असीमित पहुँच छ।
पाठ, कागजात, फोटो, अडियो, भिडियो - तपाईं यसलाई नाम, यो धेरै विश्वव्यापी र अपेक्षाकृत सानो लागत मा पठाउन सकिन्छ।
वास्तवमा, २०१ in मा एयरवेजका नयाँ किंगहरू हुन्…। हामी सबै!
रेडियो एमेचर्स अब द्वारा जोडिएको छ सबैलाई!
के यो कुनै आश्चर्य छ कि हैम रेडियो सबै अक्सर यी दिनहरु मा हेरिन्छ (मान्छे द्वारा) बाहिर कम्तिमा शौक) पुरानो जमानाको, फड्डी-डड्डी र विगतमा बाँच्न रुचाउने बुढा मान्छेहरूको संरक्षणको रूपमा?
यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन कि हामीसँग पहिचानको स crisis्कट छ - यो नयाँ रगतलाई आकर्षित गर्न गाह्रो कुरा होइन!
यदि हामीले प्रस्ताव गर्न सक्ने उत्तम हो भने "आपतकालीन संचारहरूमा सहयोग पुर्‍याउन सक्षम हुनुहुनेछ जब प्राकृतिक प्रकोप वा युद्धले तपाईंको क्षेत्रलाई तहसनहस पार्छ" यो अत्यधिक आकर्षक लाग्दैन।
लेखकको नोट: कृपया बुझ्नुहोस् कि यो ती व्यक्तिलाई बेवास्ता गर्न को लागी होईन जुन यस सेवा प्रदान गर्ने मार्ग द्वारा; म केवल हाम्रो कारणको शौक पहिले जस्तो आकर्षक छैन किन कारणहरू देखाउन प्रयास गर्दैछु - म निःस्वार्थ भई समुदायको सेवा गर्नेहरूका लागि प्रत्येक सम्मान छ, तिनीहरू शब्दको हरेक कल्पनाशील अर्थमा नायकहरू हुन्।
हराउँदै कम्प्युटरहरू - उनीहरूले शौक बर्बाद गरेका छन्
यो मन पराउनुहोस् वा नगर्नुहोस् (र म पनि उनीहरूसँग एक प्रेम-घृणाको सम्बन्ध छु) कम्प्युटरले दुबै समाजमा क्रान्ति ल्यायो र परिणामस्वरूप हाम्रो ठूलो शौक पनि। र तिनीहरू त्यसो गर्न जारी छन्।
नेटवर्क रेडियोहरू (जसलाई हामी "PTT बटनको साथ Pकेट SDR कम्प्युटरहरू" को रूपमा सोच्न सक्छौं कि तिनीहरू के हुन्) केवल यात्राको एक बढी विकासात्मक भाग हो।
ती चीजहरूले हामीलाई इन्टरनेट प्रचारको समृद्धि र रंगमा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, जबकि प्याकेजमा अवस्थित छ जुन हामीले पहिले नै बुझ्दछौं र यसैले प्रयोग गर्न सक्दछौं।
अब हामी अन्य ह्यामहरू जुनसुकै ठाउँमा पनि काम गर्न सक्दछौं यदि तिनीहरूसँग नेटवर्कमा जडान छ भने, यदि यो हामीले गर्न छनौट गरेको हो भने।
यसको सट्टा इन्टरनेटलाई पुन: प्रेषकको ठूलो सेटको रूपमा प्रयोग गर्नु जस्तै हो, तिनीहरू केवल हेम्सको लागि मात्र विशेष छैनन् - हामी बाँकी जनसंख्यासँगै सेवा साझेदारी गर्दछौं।
र हुनसक्छ यो एक कारण यो आन्दोलनको प्रतिरोध हो।
त्यहाँ थियो, र अझै पनि एक महान डिग्री, एक मा छ बहिष्कार ह्याम रेडियो इजाजतपत्र राख्ने बारे।
मलाई मेरो लागि धेरै मेहनत गर्ने सम्झना छ। मँ थिएँ, र आज सम्म पनि रहिरहेछु, धेरै गर्व छ कि मैले यो हासिल गरें (क्रेडिट र डिस्टेंक्सनको साथ मैले दुई कागजमा टेकेको छु, वैसे पनि एक राम्रो निर्दोष १२ बजेको मोर्स टेस्ट;))
तर २०१ 2018 र अधिकमा, बढ्दो शोर ब्यान्डमा प्रसारित गर्ने इजाजतपत्र, जसले ठूलो एन्टेनाको आवश्यक छ, जसले परिणामस्वरूप छिमेकीहरूसँग घर्षण र प्रतिबन्धात्मक करारहरूसँगको द्वन्द्वको कारण धेरै हम्सलाई अप्रासंगिक देखिन्छ।
नतिजा स्वरूप, यस्तो देखिन्छ कि धेरैले आफ्ना खुट्टाले मतदान गरेका छन् र सोख पूर्ण रूपमा छोडेका छन्।
बढ्दो शौक, तर हामीलाई थाहा छैन?
नेटवर्क रेडियो यद्यपि यी समस्याहरूबाट ग्रस्त हुँदैन। र हामी "शुद्ध" को रूपमा हेम रेडियो विगतको जस्तो मान्दैनौं, यसले शौकलाई जीवितै राख्न मद्दत गरिरहेको छ।
वास्तवमा, यदि मैले जे देखिरहेको छु त्यो सही छ भने, यसले वास्तवमै बढिरहेको छ!
हरेक दिन, म हेम्सलाई नेटवर्कमा आउँदै गरेको सुन्दै छु…
"म गत १० बर्षमा रेडियोमा अधिक आएको छु जो पछिल्लो १० बर्षमा छ।"
"मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि म यस च्यानलमा नआएसम्म फेरि ह्याम रेडियो प्रयोग गर्नेछु।"
"यसले मेरो शौकलाई पूर्ण रूपमा जीवन्त बनाएको छ।"
"मैले मेरो हैम इजाजत पत्र अहिलेसम्म पाइनँ, तर म तपाईहरूसँग कुराकानीबाट धेरै कुरा सिकिरहेको छु र अर्को पाठ्यक्रममा भर्ना हुन लागिरहेको छु।"
प्राचीन रोमबाट पाठ?
नेरोको बारेमा के भनिएको थियो कि - उनले "रोम जलाउँदा बेरियो"?
त्यस कथनको ऐतिहासिक सत्यताको बावजुद, म छक्क पर्दछु यदि हाम्रो शौकको भित्र त्यस्तै केहि भइरहेको छ भने।
के हाम्रो पारम्परिक ब्यान्डहरू बिस्तारै आवाजको थुप्रोको पछाडि हामीबाट टाढा जाँदैछन्?
के मानिसहरू ह्याम रेडियो छोड्दैछन् किनकि "यो के हो होइन"?
के नयाँ एन्टेना खडा गर्ने सोचाई सोशल मिडियामा परिवारसँग कुराकानी गर्नु वा तपाईंको समाचार फिड जाँच गर्नु भन्दा कम रोचक लाग्दछ?
यदि ती मध्ये कुनै एकको जवाफ हो भने, त्यसो भए मलाई सोध्नुहोस्, के नेटवर्क रेडियो सम्भवतः एक तरीकाले हामी इन्टरनेट प्रचारमा पिग्गी फिर्ता गर्न सक्दछौं र २१ औं शताब्दीमा हाम्रो शौकलाई अझ अगाडि ल्याउन सक्छौ?
यदि यो हो, वा यदि यो होईन भने पनि हामी केहि छिटो भन्दा छिटो हुन्थ्यो!
यस शताब्दीका दुई दशकहरू प्रायः एमेच्यर्सको %०% भन्दा बढीको साथ र बितिसकेको छ अर्को दुई दशकको अन्त्य सम्ममा यो ग्रहमा नहुने सम्भावना धेरै समयको लागि सोखको लागि समयको लागि बाहिर जाँदैछ ...
कसैले पनि सुझाव दिइरहेको छैन कि नेटवर्क रेडियोहरू होबीले सामना गर्ने सबै मुद्दाहरूको उत्तर हो। स्पष्ट रूपमा ती छैनन्।
तर तिनीहरू पहिलेदेखि नै हबीमा बढ्दो बढिरहेको हिस्सा खेल्दै छन् र मैले सकारात्मक अनुभव गरिरहेको छु।
हामी ठ्याक्कै हराउँछौं केही अँगालिंग गरेर उनीहरूले हाम्रो लागि के गर्न सक्छन् - र तिनीहरू केवल एउटा अवसर हुन सक्छ जुन हामी पास गर्न सक्दैनौं।
तपाईं "नेटवर्क मा" पकड?